1. လူအတော်များများသည်ပြီးပြည့်စုံသောပုံဖော်ရန်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုရှာဖွေနေကြသည်။ နုပျို၏ရာဇပလ္လင်နှင့်အတူ ဗိုက်အဆီဆုံးရှုံးပုံနှင့်ကောင်းမွန်သောပုံသဏ္ဌာန်ရှိခြင်းအားဖြင့်။ ပြန်လူငယ်ရတဲ့အပြင် မည်သည့်စတိုင်လ်တွင်မဆိုစုံလင်သောအ ၀ တ်အစားများ ၀ တ်ဆင်ပါ။ ဒါ့အပြင်ကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် မှလွဲ၍ ဘယ်သူမှမပေးနိုင်သည် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာရိုးရိုးလေးခြေလှမ်းရှိသေးတယ်။ သင်ပြီးသွားရင်သင့်ရဲ့လှပတဲ့ပုံကိုသေချာပေါက်ပြန်ရောက်သွားမှာပါ။
2. ဘောဇဉ်တစ်ခုစီမတိုင်မီသန့်ရှင်းသောရေခွက်တစ်ခွက်ကိုသောက်ပါ။ ဤနည်းသည်သင်၏အသားအရေကိုလှပစေပါသည် ထုတ်ယူစနစ် မယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်စွာဖြည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလည်းကူညီပေးသည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လို့ပဲ တစ်နေ့တာအတွင်းလန်းဆန်းစေသည် ထို့အပြင်အစာမစားမှီ ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်အတွင်းသောက်သုံးပါ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပိုမိုမြန်ဆန်စွာသောက်စေသည် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစားအစာကြောင့်ရေကိုဒယ်အိုးထဲကိုသယ်ဆောင်သွားလို့ပဲ ဒါပေမယ့်ငါကပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုတယ်။ ဗိုက်အောင့်ပျောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သလဲ။ မခဲယဉ်း
3. စားရန်ရွေးချယ်ပါ နားလည်နိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်သည် ဘယ်အချိန်မှာဝမ်းလာရန်စတင် အစားအစာရွေးချယ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အာဟာရကိုလျစ်လျူရှုထားကြောင်းပြသသည်မဟုတ်လော။ အဆင်ပြေပါတယ်၊ အမြဲတမ်းစလုပ်ပါ ဗိုက်အဆီဆုံးရှုံးမှုနည်းသောနည်းလမ်းများအတွက်အရေးကြီးသောအစားအစာများကိုဂရုစိုက်ပါ ပထမတစ်ခုကအချိုရည်ကိုကြဉ်ရှောင်ပါ။ High- သကြားအချိုပွဲ ဓာတ်နည်းသောအစားအစာများကိုစားပါ။ ဒါမှမဟုတ်အစေ့လုံးလိုမျိုးဂျုံမှုန့်ကိုပြောင်းပါ သို့မဟုတ်မုန့်, ဂျုံမုန့်ညက်တစ်ခုစီ၌ဖြည့်ညှင်းအတွက်ဂျုံမုန့် အကယ်၍ ဆန်ဖြစ်လျှင်ဘောဇဉ်တစ်ခုချင်းစီတွင်တစ် ဦး တည်းစားပါ။ ပျက်စီးသွားသောrepairရိယာများကိုပြုပြင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပရိုတင်းအစာများထည့်ပါ။ ပြီးတော့ဖိုင်ဘာပိုများသောအစားအစာများ အစာစားခြင်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိသည်ကိုမမေ့ပါနှင့်။ ၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိုးကားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်မှအသုံး ၀ င်သောအရာတစ်ခုခုကိုကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့ပိုကောင်းအောင်ရွေးရန်ရွေးချယ်ကြပါစို့။
4. သင်နှစ်သက်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုရွေးပါ၊ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပါ၊ ရာနှင့်ချီသောလူများသည်အလားတူလေ့ကျင့်ခန်းကိုနှစ်သက်ခြင်းမရှိကြပါ။ ဒါကြောင့်ငါအာရုံစိုက်ချင်ကြဘူး ၎င်းသည်မည်သည့်လေ့ကျင့်ခန်း (သို့) မည်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးဖြစ်ရမည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်။ အဆင်ပြေမှုပေါ် မူတည်၍ တစ်ပတ်လျှင် ၃-၅ ရက်၊ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပါ သို့သော်အသက်အရွယ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုပေါ် မူတည်၍ မိနစ် ၃၀ မှ ၁ နာရီအထိဆက်တိုက်လုပ်ရန်လိုသည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ ယောဂ၊ ကခုန်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ နှင့်အခြားအပြုအမူတွေနဲ့အတူ ဗိုက်အဆီလျှော့ချနည်း မြန်မြန်မပါဘဲ ဝမ်းဗိုက်အဆီကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချပြီးကျန်းမာရေးနောက်ကျသွားပါလိမ့်မယ် ထိုအထွန်းလင်းထင်ရှားသကဲ့သို့
5. အကောင်းမြင်ပါ စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချပါ ပုံမှန်သင့်ရဲ့အပြုသဘောစွမ်းအင်နှင့် EQ တိုးမြှင့်။ ဒီဟာကလုပ်ဖို့အခက်ခဲဆုံးပဲ။ အတွေးများ၊ စိတ်ခံစားမှုများသို့မဟုတ်ဖိစီးမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားသည် နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့နှင့်အသကျရှငျဖြစ်ကြသည် သို့သော်အရာများကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားပါ ဘာမှသေချာသည်မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်မှုခံစားခဲ့ရတယ်။ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးမကြာခင်ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ်။ ပြproblemနာတိုင်းမှာအဖြေတစ်ခုရှိပါတယ်။ နှင့်အနားယူချိန်၌ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းမြင်ပါ သင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးများကိုခေတ္တချန် ထား၍ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရန် ဦး စားပေးအာရုံစိုက်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုနာကျင်စေမထားပါနဲ့။ ပိုဖိစီးလေလေများများစားလေ ပိုမိုဖိစီးလေလေစိတ်ပျက်လေလေဖြစ်သည် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်သည် ပုံစံတိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်အတူရန်သူ
6. ရိုးရှင်းပြီးလုံးဝမခက်ခဲပါ။ တကယ်တော့၎င်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရန်နှင့်ကောင်းသောအရာများကိုသင့်ကိုယ်သင် ပြန်၍ ပေးခြင်းဖြင့် သို့သော်ပုံမှန်လေ့ကျင့်မှုလိုအပ်သည် ကောင်းသောကျန်းမာရေးရောင်းချရန်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် သင်လိုချင်လျှင်သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရမည်။